Ekhaya | Subsidiary company from GuangDong Jueheng Group
Sijonge ukunika amaqabane ethu iimveliso ezinobuchule ezisemgangathweni ezinokhuphiswano ngamaxabiso.
Izinto zokuthambisa zeCeramic Bath
Izixhobo zegumbi lokuhlambela lePolyresin
Isamente Igumbi lokuhlambela zeVenkile
Ngaphezulu kweeseti ezingama-5000 ezikhoyo!
Nentlaka / yodongwe / isamente / terrazzo
Izixhobo zegumbi lokuhlambela / umhombiso wasekhaya / i-ceramic tableware
IQela laseGuangdong JueHeng lifumaneka kwisiXeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong. Sigxile ekuveliseni izincedisi zokuhlambela ezibekwe njengeeseti zeempahla zegumbi lokuhlambela, izinto zegumbi lokuhlambela, izinto zokuhombisa zesamente, umhombiso wasekhaya kunye netafile yeceramic yabathengisi abakhokelayo eMntla Melika, eMzantsi Melika, eYurophu, kuMbindi Mpuma nakwihlabathi liphela.
I-Chinoiserie yophondo lwendlovu yodongwe igumbi lokuhlambela izixhobo zokuvelisa igumbi lokuhlambela
I-Luxury clear resin ngaphakathi kwe-Stereoscopic rock rock isitshisi esinezixhobo zokuhlambela
Iiseti zezincedisi zegumbi lokuhlambela zeblue ceramic zaseChinoiserie
Imination etyheli ye-rattan resin yokuhlambela iiseti
& IINKONZO ZE-ODM
■ Amava alishumi elinambini anikezela ngezixhobo zokuhlambela amava okuSebenza
Yasekwa ngonyaka ka-2007, luphando lwenzululwazi, imveliso, ukuthengisa kwishishini lobuchwephesha obuphezulu, ukudibanisa inani leziseko zethiyori kunye namava atyebileyo obuchwephesha bobuchwephesha.
■ Iqela elomeleleyo
Inkampani ixhotyiswe ngobuchwephesha bobuchwephesha, iphuhlise isoftware yayo yokulinganisa kunye nokufumana isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi wesoftware.
■ Inkonzo yobungcali / yokuThengisa emva
Sinikezela ngenkonzo yokuthengisa emva kwexesha, njenge: ukufundisa ividiyo, ukufundisa ngomnxeba, izixhobo ezikude, iincwadana.
■ Uqinisekiso lomgangatho
Inkampani yethu sele inamalungelo awodwa omenzi wechiza, ifumene ulwazi lwesizwe lwesatifikethi sobhaliso lobunikazi.
IQela leGuangdong JueHeng-Umthengisi weZinto zeGumbi lokuhlambela
Iqela laseGuangdong JueHeng, umthengisi wezincedisi zangasese, ubekwe kwisiXeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong Sigxile ekuveliseni izincedisi zokuhlambela cwangcisa ikhonkco polyresin igumbi lokuhlambela, izincedisi zegumbi lokuhlambela, izinto zesamente zokuhombisa, umhombiso wasekhaya kunye netafile yeceramic yabathengisi abakhokelayo eMntla Melika, uMzantsi Melika, iYurophu, uMbindi Mpuma kunye nehlabathi liphela.
Sinemizi-mveliso engama-7 egubungela iimitha zesikwere ezingama-35,000 kwaye inabasebenzi abangaphezu kwama-600. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava okusebenza kunye neqela leengcali, siyile ngaphezulu kweeseti ezingama-5,000 zokufikelela kwigumbi lokuhlambela. Senza ushishino nabarhwebi kunye nabavelisi ngokufanayo kwaye sisebenze iinkampani ezahlukeneyo zeFortune 500 ezinje ngeBed Bath
Ngaphaya, iWalmart, H
& M, Hilton, TJmaxx, ALDI, Ithagethi, kunye noWilliam Sonoma.
Sizixabisa kakhulu iimbono zabaxhasi bethu kwaye sifuna ukubanika ezona nkonzo zinobuchule.
Shiya i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhakamshelwano kwaye sinokunxibelelana nawe！